MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Kristian SCHMIDT as Ambassador – Head of the Delegation of the European Union to the Republic of the Union of Myanmar
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of Mr. Kristian SCHMIDT as Ambassador – Head of the Delegation of the European Union to the Republic of the Union of Myanmar.
Mr. Kristian SCHMIDT was born in Denmark on 12th July 1967. He obtained Economic degrees from the Droit University of France and the Copenhagen University of Denmark, Political Science degree from the Etudes Institute of France, Political Science and International Law degree from the University of Bologna of Italy and Master’s degree in International Relations from the Cambridge University of the UK. From 1993 to 1999, he served at the Ministry of Industry and Ministry of Foreign Affairs of Denmark, Permanent Mission of Denmark to the United Nations, New York respectively. He also served at the European Union and European Commission in various capacities from 2003 to 2013. Since November 2013, he has been serving as Ambassador-Head of the Delegation of the European Union to Uganda. He is married and has three children.
Mr. Kristian SCHMIDT အား ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၏ အကြီးအကဲ/ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ် ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူညီပြီးဖြစ်သည်။
Mr. Kristian SCHMIDT ကို ၁၉၆၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ဒိန်းမတ် နိုင်ငံ၌ မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ Droit တက္ကသိုလ်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ Copenhagen တက္ကသိုလ်တို့မှ စီးပွားရေးဘွဲ့များကို လည်းကောင်း၊ အီတလီနိုင်ငံ Bologna တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ Etudes ကောလိပ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံ Cambridge တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး ဘာသာရပ်မဟာဘွဲ့ကိုလည်းကောင်း အသီးသီး ရရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်အထိ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ စက်မှုဝန်ကြီး ဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ် အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့၌ လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၃ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် အထိ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ဥရောပကော်မရှင်တို့၌လည်းကောင်း ရာထူးအဆင့်ဆင့်ဖြင့် တာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှ လက်ရှိအချိန်အထိ ယူဂန်ဒါနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၏ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အိမ်ထောင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သားသမီး (၃) ဦးရှိပါသည်။